Masinina fanoratana tamin'ny laser mahery vaika Gear BL-MGS-IPG100W mpanamboatra sy orinasa | Boln
1.Miorina firafitra takelaka metaly mamela ny kabinetra amin'ny fanoherana ny fikororohana tsara, ny fanoherana ny harafesina, ny fanoherana ny fiatraikany, ny fanamafisana ny vovoka ary ny fiarovana ny taratra, ny fiantohana ireo fitaovana anatiny mihazakazaka am-pilaminana sy milamina, endrika ergonomika, fampandehanana mahazo aina kokoa
2.Ny fampiasana ny haitao mandroso mifantoka auto-auto, ny rindrambaiko manamarika dia afaka manoratra ho azy ny masontsivana ifantohan'ny vokatra. Rehefa manova vokatra samihafa, ny fitaovana dia afaka manamboatra fifantohana ho azy tsy misy fandidiana tanana
3.Ny famolavolana fametrahana Centering manan-tsaina kokoa, amin'ny alàlan'ny fitaovana fametrahana amin'ny lafiny roa, ny mpamaky dia mila mametraka baoritra eo amin'ny lampihazo fotsiny, avy eo miasa ny fitaovana ary mahatsapa ny fametrahana ny foibe, mamaha ny olan'ny fanamarihana offset ateraky ny fametrahana ny tanana sy ny fanatsarana. ny fahombiazan'ny marika
4. Ho fanampin'ny fampitomboana ny vokatra, ny mpanjifa koa dia naniry ny ho afaka hanamarina ny kalitaon'ny marika DataMatrix. Izany no antony nampidirinay mpamaky kaody teo ambanin'ny lohan'ny laser, izay manome fomba fijery tena malalaka, tonga lafatra amin'ny famakiana indray ny kaody 2D (DMX, QR) ary koa ny fanentanana ny marika amin'ny singa kely kokoa. Ny rindrambaiko namboarinay dia mamela anao hahita avy hatrany ny diplaoma fanamarihana sy ny kalitaon'ny asa eo amin'ny monitor.
5.Germany nohafarana loharanom-laser laser an'ny WW 100W izay mahavita vokatra vita sokitra lalina kokoa ary hahomby kokoa.
6.Ny rindrambaiko fanamarihana namboarina nifaneraserana tamin'ny rafitry ny MES an'ny mpanjifa dia afaka mampakatra ny angon-drakitra vokatra sy manitsy ny toeran'ny fanamarihana ho azy.
Fitaovana lehibe: 1190mm x 700mm x 1890mm
Fitaovana kely: 950mm x 750mm x 2140mm
Teo aloha: Masinina fanamarihana laser Gear BL-MG-IPG100W
Manaraka: Turbochargers Laser Manamarika sy milina fitiliana